စတော်ဘယ်ရီနဲ.ဒိန်ချဉ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
စတော်ဘယ်ရီသီးနဲ. ဆားကို ရောပြီး..မညှက်တညှက်( လက်ချေပုံစံမျိုး)
သစ်သီးကြိတ်စက်မှာ...ဒိန်ချဉ် ၊ သကြားရည်၊ နို.ဆီတို.ကို ရောကြိတ်ပါ။
အလှဆင်ချင်ရင်တော့..အပေါ်ဆုံးက စတော်ဘယ်ရီသီး (၅) ခြမ်းလောက်
ဖြစ်စေထည့် ( သို.) စတော်ဘယ်ရီသီးကို ထက်ခြမ်းဟပေးပြီးဖန်ခွက်နှုတ်